Madaxweyne ku xigeenkii hore Ee Joe Biden Ayaa Madaxweyne Donald Trump U Garaacay Dooddii Ugu Dambeysay Ee Madaxtinimada!!!﻿ | Hayaan News
Madaxweyne ku xigeenkii hore Ee Joe Biden Ayaa Madaxweyne Donald Trump U Garaacay Dooddii Ugu Dambeysay Ee Madaxtinimada!!!﻿
Run ahaanti madaxweyne Donald Trump kuma korin ganacsigan iyo siyaasadan-inta badan wuxuu dhiiri galiyaa jiho qaldan iyo dhaqaaq lama filaan ah oo gabi ahaanba ka soo horjeeda danaha qaranka Maraykanka.
Madaxweyne Donald Trump waa kabtan fowdo iyo kibir badan oo aan dhegaysan aqoon yahanada, guud ahaan siyaasiyiinta iyo siyaasiyiinta kale ee ka yaqaana garoon kasta.
Qof kasta oo ii sheegaya madaxweyne Donald Trump mustaqbal ayuu leeyahay hogaaminta Maraykanka ee cajiibka ah waa mid ku dhisan munaafaqnimo xaqiiqdii.
Sababtoo ah wuxuu Mareykanka ka badbaadin waayay cadowga aamusan ee Coronavirus argagaxisada ah ee dilay in ka badan 2010,000 iyadoo dayactir iyo xumaan xumo.
Maalinta koowaad, haddii madaxweyne Donald Trump uu isticmaalo mask oo uu dalka si fiican ula hadlo-dad badan oo Maraykan ah ayaa qoysaskooda la joogi doona maanta.
Laakiin madaxweyne Donald Trump ayaa si aan caadi ahayn u kala fogeeyay wuxuuna beeniyay in uu yahay mas ‘ uuliyadiisa ama masuuliyadda badbaadada.
Cadaalad xumada jinsiyadaha iyo kala danbaynta kaligii talisyada aduunka waxay siinaysaa muuqaalka cadaaladda ah ee America maanta.
Dhab ahaan waxaan ubaahanahay Ameerikaan xoogan oo hogaamiya caalamka sidii caadada ahayd-laakiin aan hogaanka kabtan fowda, madaxweyne Donald Trump.
Madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden waa nin aad u wanaagsan, rumaysan oo daacad ah oo u adeegay Mareykanka qiyaastii konton sano.
Fiiri anigu Maraykan ma ihi-laakiin waxaan jeclahay oo ixtiraamayaa Maraykanka iyo qarankaas cajiibka ah.
Joe Biden ima yaqaano-Hogaamintiisa quruxda badan iyo awooda leh ayaa gees walba ka heli kara meerahan.
Xaqiiqdii madaxweyne Donald Trump ma ahan mid aan loo isticmaalin Mareykanka ama Caalamka-Xabag uma hayo hogaaminta, siyaasada ama maamulida boqolkiiba sideed iyo toban ka mid ah hay ‘ adaha kale ee qarankaasi.
Joe Biden wuxuu yaqaan xuquuqda muwaadin kasta iyo qof kasta oo American ah waajibaadka saaran. Wuxuu mudnaanta koowaad siinayaa dadka Maraykanka ah halkii uu Totalitarians-taariikhi ahaan Maraykanku ugu horayn sharci dejinta iyo xadgudubka aan la aqoon.
Madaxweyne ku xigeenkii hore waa mid u qalma, khibrad iyo waxtar u leh dalka Maraykanka.
Reer America mar horeba waxay dhibsadeen bulsho, dhaqaale iyo siyaasad, shaki kuma jiro xaqiiqdii. Hase yeeshee, waxaa la joogaa waqtigii Donald Trump aqalka cad laga riixi lahaa lana shaqaalaysiin lahaa qaranka quruxda badan iyo aqoonta leh Joe Biden.
Codee-ka November oo xalli dhibaatooyinka aad ku jirto dastuurkaaga la weeraray, Coronavirus iyo siyaasadda arrimaha dibadda oo ay maamulaan cadowga Mareykanka, Ruushka.
Iska ilow Iran, China, Waqooyiga Kuuriya, laakiin khatarta ugu weyn ee Maraykanka waa Vladimir Putin-aad ugu dhow madaxweyne Donald Trump.
Danta guud ee dalka maraykanka waxay ku socotaa gacanta amaanka ee Joe Biden xaqiiqdii. Sida madaxweyne Donald Trump uu jiho qaldan ugu hogaamiyo kaalin kasta oo American ah oo sharaf iyo kibir leh.
Adoon ka waaban codkaaga sii madaxweyne ku xigeenka Joe Biden-waa hogaamiye fiican oo wanaagsan Maraykanka-sidoo kale caalamka.
Joe Biden gacmo furan, qalbi furan iyo hogaamiye la isku halayn karo dhamaan kooxaha. Waa hogaamiyaha dhamaan iyada oo aan lahayn qayb ka mid ah Maraykanka ama caalamka.
Ilaahay ha xifdiyo America,
Waxaan qaadanayaa waajibaadka geesigayga xildhibaanka daahsoon, John McCain-oo ku hadlaya eraygiisii ahaa,
U codee Joe Biden,
Kabtan fowdada wuxuu America u horseedaa jiho qaldan iyo kala qaybsanaan; ma ahan America oo kaliya-laakiin aduunka.
Xanaaqa iyo dhoolacadaynta waxay saf u yihiin dadnimada iyo hogaaminta fasalka aduunka.
Joe Biden wuxuu runta iyo nidarku u hoggaansamay sharciga Mareykanka iyo shuruucda siinaya xuquuq siman dhammaan muwaadiniinta Mareykanka.